Kukanda, chirongwa chekudzidzisa chirongwa kune vadiki | Linux Vakapindwa muropa
Programming hunowedzera hunodiwa hunyanzvi, kwete chete kune vadiki kwazvo asiwo kune vanhu vakuru. Izvi zvave kuita kuti zvive nyore uye zvive nyore kugadzira chirongwa uye kuchiisa sechinyorwa pakutanga kweLinux inoshanda sisitimu kana kungoisa pane Yemahara Hardware bhodhi.
Asi kunyangwe iri nguva dzese nyore kudzidza mutauro wepurogiramu, zvirongwa zvekudzidzisa pazvirongwa zvinogara zvichidikanwa. Zvirongwa senge yakakurumbira Kukanda.
Kukanda chirongwa chakazvarwa kudzidzisa vana zvirongwa, asi chishandiso chinobatsira chero munhu kuti adzidze mbiru dzechirongwa.
Iye zvino Kukanda kunowanikwa muzvikoro zvakawanda, asi haisi software yekudyidzana asi zvakapesana uye tinogona kuiisa pane yedu Gnu / Linux kugovera pasina dambudziko. Uye zvakare, Scratch ine vhezheni yepamhepo izvo zvinokutendera kuti ushandise chirongwa ichi kubva pawebhusaiti, kuti chero munhu agone kushandisa chirongwa ichi.
Kukanda kunodzidzisa zvirongwa zvakakosha nemifananidzo uye nyaya dzevanhu
Kukanda chishandiso chekudzidzisa icho nekuda kwekatuni nekatsi isu tinogona kudzidza izvo zvekutanga zvehurongwa (zvishwe, zvimiro zvekutonga, zvinoshanduka, zvinowirirana, nezvimwe ...). Iko kuvhiya hakuna kuvharwa asi chero munhu anogona kunyora nyaya uye kugadzirisa mashandiro acho, kuve zvishoma nezvishoma kudzidza izvo izvo Scratch zvinopa kumudzidzi.
En iyo Scratch webhusaiti tinogona kuwana akawanda ekuwedzera zviitiko uye vhidhiyo zvidzidzo zvinozotibatsira kushandisa Scratch kwete chete sevadzidzi asiwo sevadzidzisi uye kunyange sevavandudzi.
Kuiswa kwescracth mukugovera kwedu kuri nyore. Kuva mumahofisi epamutemo, isu tinongofanirwa kuisa iyo yekuisa package yekuisa pamwe nezita rekuti Scratch kana kushandisa Software Center yekuparadzira. Zvinodiwa zvechirongwa ichi zvakadzikira. Iye zvino hapana chikonzero chekudzidza kuronga Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Kukanda, chirongwa chekudzidzisa chirongwa kune vadiki